Home Wararka Taariikh: MW Farmaajo oo noqday MW ugu horeeyay oo mooshin baarlamaanka ka...
Taariikh: MW Farmaajo oo noqday MW ugu horeeyay oo mooshin baarlamaanka ka qabto
Maanta mar kale ayuu Madaxweyne Farmaajo uu baal mugdi ah ka galay taariikhda Soomaaliya, waxa uu noqday Madaxweynihii ugu horeeyay xili casriga ah ee Baarlamaanka Soomaaliya uu ka qabto qoraalka Mooshinka.
Waa ay jireen Madaxweynayaal horay laga qoray Mooshin laakiin marnaba lama horgeeynin Baarlamaanka ama lagama diiwaan galiyay. maanta waxa uu Farmaajo ka galay taariikhda siyaasadda Soomaaliya baal madoow oo aan waligii ka hari doonin. Maxaa u talo ah?
Previous article(Deg Deg) Maxaa lagu gorfeeyay kulankii qado ee RW Kheyre iyo Gud. Maxamed Mursal (Wax ka oogt)
Next articleMooshinka kalsooni kala noqoshada MW Farmaajo ee la gudbiyay (Akhriso)
Amaro culus oo lagu sugayo Amaanka Madaxtooyada Soomaalia oo lasoosaaray kadib...